Olee otú Hichapụ Photos si iPod aka na ogbe
> Resource> iPod> Olee otú iji Hichapụ Photos si iPod aka ozugbo
Chọrọ ịmata otú ka ihichapụ foto site na iPod aka ozugbo mgbe ị nwere ọtụtụ na gị iPod aka, dị ka iPod aka 5? Na nza nke oyiri foto gị iPod aka, ị chọrọ ka ihichapụ ha. N'ụzọ dị mwute, Apple Company na-ahapụ gị kpọmkwem dezie ma hichapụ foto na igwefoto Roll na gị iPod aka otu otu, ghara ihichapụ ndị nọ Photo Library ma ọ bụ albums kere site onwe gị.
Ọfọn, ka ihichapụ photos anya iPod aka, ị kwesịrị ibudata na-eji ihe iPod foto iwepụ ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac) (n'ihi na Mac ọrụ). Na ya aka, ị nwere ike nke wepụ gị iPod aka photos na ogbe ozugbo. Na nzọụkwụ nke ma nsụgharị bụ nnọọ mfe ma yiri nke ahụ. Dị nnọọ download nri version dị ka gị onwe gị na ọnọdụ.
Esi wepụ foto site na iPod aka na ogbe
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod aka na PC na-agba ọsọ a usoro
Ebe a, anyị dị nnọọ na windows version dị ka ihe atụ. Na-amalite na, na-agba a iPod foto iwepụ ngwá ọrụ mgbe wụnye ya na gị na PC. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPod aka gị na PC site eriri USB. Nke a iPod foto iwepụ ngwá ọrụ ga-chọpụta gị iPod aka ka anya dị ka ọ na-ejikọrọ.
Cheta na: Ị ga-ibudata ma wụnye iTunes na PC gị na n'ihu na-eji Wondershare TunesGo.
Nzọụkwụ 2. ihichapụ foto na iPod aka
Mgbe ị jikwaa ẹkedori a iPod foto iwepụ ngwá ọrụ, e dinara a ndekọ osisi na n'aka ekpe ebi ndụ. Pịa "Photos" na-emeghe foto management window.
Abụọ-pịa Photo Library, Igwefoto mpịakọta ma ọ bụ ọzọ album. Họrọ foto ị chọrọ ka ihichapụ, wee pịa "Hichapụ". Nke a iPod foto mwepụ ga-amalite iji wepụ gị achọghị foto. N'oge mwepụ usoro, ị ga mma Akwụpụla gị iPod aka.
Ị mere nke ọma! Na i tinyeworị ehichapụ ndị a na-achọghị foto gị iPod aka. Ugbu a, mbubata ndị ọzọ faịlụ, dị ka songs, fim na Podcast.
Ọ bụ nnọọ adaba n'ihi na ị ka ihichapụ multiple photos ngwa ngwa na ihe Photo Library na ndị ọzọ na albums na gị iPod aka na enyemaka nke a usoro. E wezụga iPod aka, a usoro-enyere gị aka wepụ foto na niile iPhones na iPads, dị ka iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 4S, na iPad Obere.